घलेम्दी हाइड्रोको साढे ५ लाख कित्ता आईपिओ असार २२ देखि खुल्ने,कस्तो छ कम्पनी ? | Biswas News
घलेम्दी हाइड्रोको साढे ५ लाख कित्ता आईपिओ असार २२ देखि खुल्ने,कस्तो छ कम्पनी ?
घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले साढे ५ लाख कित्ता साधारण शेयर (आईपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । हाइड्रोले पहिलो चरणमा असार २२ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र म्याग्दी स्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका स्थानीयको लागि आईपिओ जारी गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र म्याग्दीका स्थानिय बासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ५० हजार कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।
उक्त आइपिओमा असार २२ देखि छिटोमा साउन ४ र ढिलोमा साउन २० गतेभित्र आवेदन गर्न सकिनेछ । जसमा न्युनतम ५० देखि अधिकतम २७५० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले कम्तिमा ३ वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाउने शर्त राखेर स्थानीयलाई शेयर आवेदन खुलाएको हो ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमा भिवोर क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीयबासीले म्याग्दीको ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, गरिमा विकास बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र अयोजना प्रभावितलाई तोकिएको स्थानबाट शेयर आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावितका लागि शेयर जारी गरेपछि कम्पनीले ११ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लाग निष्काशन गर्ने छ ।merolagani
Previous articleकाष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि माटो र इँटा परीक्षण
Next articleअ ता ले अहिलेसम्म कै ठुलो आईपिओ जारी गर्दै, असार २४ गतेबाट शेयर निष्काशन